कुरो को खेती | मझेरी डट कम
कुरो को खेती
Manoj Bohara — Thu, 08/01/2013 - 11:26
कुरोको चुरो समात्न नसकेर मेरो भूरो पूपूरोमा हात राखेर कुरकुच्चो ठटाएर बसेको देखेर हुनसम्मको दुःख लाग्छ बाबु के भो तलाई म उसको कपाल मुसार्दै सोद्धो भए डेडी हिसाब आएन । कहाँबाट हिसाब जानोस त - हिसाब भनेपछि पिसाब निक्लनेको जो सन्तान पर्यो ।
सुनेउ कालको बाउ यस पाला त कालेलाई टिउसीन हाल्दीनु पर्योत । नखरमाउलीकी आमा उखरमाउली बारीको कान्ला बाटै कराउँदी भै । जता जतै इन्डिएन शिक्षकको विगविगी कसले पो राम्रो पढाउला र । अर्को कालेको भाई ढाले UKG पढ्ने भै सक्यो । एप्पल भन्दा माथि जान्न सकेको छैन । छोरा ए वि सी डि भन्त भनेर सोधयो भने ए फर एप्पल, वि फर बडा एप्पल, सि फर छोटा एप्पल रे डि फर ची के भन्दो रहेछ भनेर सोधेको त दो एप्पल रे । पढ्न लागिको ३ वर्षभै सक्यो अहिलेसम्म एप्पल मै घुमीराखेको ढाले त्या भन्दा अगाडि बढ्नै सकेन यै देखेर वाक्किएको म मेरो कालेलाई इन्डीएन शिक्षकको शाया पनि पर्न दिन्न भनेर ठानेको थिएँ । बाउ आमा हुँदा हुँदै पनि छोरो टुहुरो झे घोत्लेको देखेर त्यसको हिशाब को किताब हेर्न लागें । हिशाबको किताब मात्रै4वटा रे छक्कै परे । हाम्रा पालामा हिशाबको किताब जम्मा एउटा हुन्थे त्यैपनि ३ कक्षा बाट कहिले माथि उक्लिन सकेको हैन । एउटा त ठिकै हो जोड घटाउ रहेछ ब्यापार गरेर खाला अर्को किताबको नाम नै मैले बोक्सी किताब राख्देको थिए उखरमाउली ले त त्यो किताबाको कारणले छोरालाई धामीकहाँ पुर्याैई छे । धामी बाजे के भयो त भनेर सोद्धा भएछन् । बाजे के भयो भयो कुन बोक्सी लाग्यो हेर्दिनु पर्योध राति सुत्दा पनि अल्फा बिटा, गामा डेल्टा भनि कराउँछ । बाजेले तिन त्रिलोक चौध भुवन देखेछन् । सुन्दै नसुनेको रोगको बारेमा। उपचार गरु भने था छेन । नगरु भने सबैले मानिआएका अब्बल दर्जाका धामी बाजे पर्नु धर्म संकटमा परेछन् । बाजेले एउटा जुक्ति निकालेछन् र भनेछन् । यो फटफटे भूत हो । हरियो सिउर भाको रातो भाले काट्नु पर्छ । मेरी उखरमाउली हरियो सिउर भाको रातो भाले खोजी राखेकी छ ।
ससार यस्तै छ । जाने नी नजाने नी आफ्नो नाक जोगाउनै पर्योत । नत्र उखरमाउलीली कम्तिको उखामाउलो मच्चउँदैन थीत न यो जानेर जानीसक्नु न भनेर भनि सक्नु हुन्थ्यो । त्यसैले जानेर होस या नजानेर हो । कुराको खेती गर्नुपर्छ भन्ने म बबुरोलाई के थाहा कुराको महिमा अपरम्पार छ । ज्यामी होसकी धामी, नेपाली होस की कपाली रामेदेव होसकी बामदेव, कामदेव नै जन्मे पनि कुराको खेति गर्न जानेन भने क्यै लछारपाटो लाउदैनन ।
अर्को किताब साध्ये रे न पुजारी पाध्ये बाजेले पढ्ने पुराण जस्तो छ न मस्लिमले पढ्ने कुरान जस्तो छ । लामा लामा धर्को तानेको छ चाहिने नचाहिने गोलो बनाको छ । धर्कोको एउटा पुच्छर ए रे अर्को पुचछर वि रे त्यतिले नपुगेर जोडियो रे कुन चाही नौलो कुरो भयो । प्रचण्ड, सेरबाहादुर र झलनाथ जोडिएका हुन र ?
बरबोटे औषधि पसलमा नयाँ कामदार राखेछ औषधि पसल्नीको कान्छो भाई अरे भर्खर म्याटि्रक पास गरेको अति भेधावी छ भन्थे पूजारी पाध्ये बाजे । निक्के गुणगान गाउँदै थिए । एकदिन पूजारी बाजे पखाला लागेर सिकिस्त भएकोबेला औषधी किन्न भनेर बरबोटे औषधी पसल गएछन् । त्यै पसल्नीको भाईले सिटामोल निकालेर दिएछ । के-के बार्नु पर्छ नी बाबु ।
"अरु त त्यस्तै हो बाजे शंख चाही जोडले नफुक्नु है ।" लौ नसक्नु भो रे २ दिनमै बाजेको रोग ठिक ।
बिद्यालयदेखि औषधालयसम्म सौचालयदेखि कार्यालयसम्म, चिया पसलदेखि भट्टि पसलसम्म कुराखेती नहुने भन्ने विरलै भेटीएला । भाको कुरालाई तोडमोड गर्न नजाने हात्ति चढ्ने हरु हात्ति छाप मै, प्राडो चढ्ने हरु पाडो मै , घोडा चढ्नेहरु धुरी माथि चढेर माइक फित्ता घाँटीमा बेरेर टाउको हल्लाउँदै ठिटि जिल्याउँदै हिड्थे होलान् ।
असकल पढ्ने नेता बन्नु, श.करदेव पढ्ने अभिनेता बन्नु, सरस्वतिमा पढ्ने चाही इन्जिनियर बनेर गाउँ गाउँमा पुल बनाएर हिड्दै छन रे । आखिर जता गएपनि गर्ने भनेको कुराको खेती त पर्योढ नि / डाक्टर हुनकी मास्टर, नेता हुनकी अभिनेता, वकील हुनकी पत्रकार, कवि हुनकी व्याङ्यकार कुरोको खेती नगरी चुचुरोमा पुगको तपाईले एकजना पनि भेट्नु भो भने नर्कमा हेलिकप्टर पठाएर र्स्वर्ग लग्ने जिम्मा मेरो । कट्टुवालको कट्टु किन्न होसकी भुँडीबालको भुडी भर्न होस कुकुर रत्याउन होसकी तरुनी पट्याउन होस थोत्रो स्पिकर जस्तो घोक्रो नबजाइ पार पाउनै सकिन्न .
लौ म त कुरा गर्दा कर्दै कतापो पुगे छु । उखरमाउली ले मार्ने भै । जे होस त्यल्ले भन्या पनि मान्नै पर्योत । नत्र अहिले उखरमाउलो मच्चाउँछे सक्ने भए टुपपीमा समातेर घुमाउछे । इन्डीएन मास्टरसंग छोरा पढाउँदीन भन्दा पनि धरै पाइन उखरमालीको मन राख्न लागें उकाले ।
पोल्दा पोल्दै उम्केको माछा जस्तो ज्यानमा, तातो घाममा तेल घसेर बस्दै रहेछ मलाई देख्ना साथ नाक फुलाउँदै टाउको उचाल्दै भन्ने थाल्यो । ओह हजुर, तपाई पनि आइलिनु भो । तपाईंको छोरालाई टिउसीन हालिलिनलाई होला नं. १ को वि एसी जो ठहरे, गाउँ भरिका भुराहरु म कही टिउसीन पढीलिन्छन् । महिनाको १००० रुपैये पढाए पढाउनुस नपढाए कोनो मतलब नही, मैले बोलन नपाउँदै एकै सास मा भन्यो । तातो घाममा हिडेर होकी इन्डिएन शिक्षकको कुरा सुनेर हो । मेरो पूपूरो बाट धुँवा उड्न लाग्यो । तिमिलाई हिसाब आउँछ । हे जस्तो पनि बनाइलिन्छु । सकेनौ भने नी तिमीलाई स्कलुबाटै निकाला गर्दिन्छु नि मन्जुर छ । समहतिको टाउको हल्लायो । मैले नी लोकसेवामा जस्तो हुँदै नभाको प्रश्न तेर्साएँ "एउटा बर्गाकार पोखरीको ठिक्क बिच भागको ४० मिटर माथिबाट ८० किमी प्र घन्टको दरले एउटा माछा खाने चराले माछा समातन खोज्दा माछो भागेर पोखरकिो छेउमा पुग्यो भने भाछाको गति र पोखरीको क्षेत्रफल पत्ता लगाउ ।" हुने प्रश्न भाको भएपो मिलाउनु । कपिको पानामा र्कोर्दै च्यात्दै फाल्दै गर्न थाल्यो र अन्तमा हार खाएर मै पटि प्रश्न तेस्र्यायो तपाईको सान्सको विद्यार्थीहो । मैले नी झट्टै उत्तर दिए हो हो मैले नि सरस्वती बहुमुखीमा साइन्स पढेको हो उसले बुझे झै गरी टाउको हल्लायो । हिसाब नजानेको ले स्कूलबाट ननिकाल्न अनुरोध गर्दै छोरा सित्तैमा पढाइ दिने विन्ति गर्न लाग्यो ।
मैले नि बाटो तताएँ । बाटामा फेद न टुप्पाको गित गाउँदै एउटा गाइने हिड्दै थियो ।
"जे सिकायौ त्यही जाने मैले के विराएँ मैले के बिराएँ ।"
लेखनः सन् २०१०
टाढा छु म...!
दुई आत्माको मिलन
जिएको थिए तिम्रो निम्ति ...
लछा याक्थुँग आवैबारो